Siyaasadda iyo Dhalinyarada? |
Ilhaan Ciise Maxamed — April 4, 2019
Marwaliba bulshadeena waxa ey aad ugu mashquulsanyihiin kahadalka siyaasadda, in kabadan arimaha caadiga ah ee nolosha.
Qofkasata oo nool waxa uu leeyahya dano asaga ugaar ah oo mashquul ugu filan, hase ahaatee marwaliba bulshadeena waxaa laga dhax dareemaa guuxa arimaha siyaasadda iyo hadalheynta arimaha xasaasiga ah ee quseeya siyaasadda.
Dhalinyarada waxa ey qeyb kayihiin bulshada, waxa eyna saameyn xooggan kulleeyihiin kahadalka arimaha siyaasadda. Waxa ey sijoogta ah uga hadlaan arimaha ugu cusub ama xasaasiga ah ee siyaasadda. Tusaale marki wasiir laga qaado xilka waxaa si siman baraha bulshada loogu falanqeeyaa xilkaas laqaaday iyo sababti keentay in xilkaas laga qaado wasiirka, waxa eyna sii shaaciyaan wasiiro kale oo xilalkooda weyn doono iyaga oo aan uheynin wax caddeymo ah.
Arimaha ugu qatarta badan waa in qof waliba uu kahadlo arimaha aan quseynin asaga ee ku’aaddan siyaasadda iyo saameynteeda. Waxaa intaas kasii daran guud ahaan hadalada kutiri kuteenta ah in aan cidina dhag jalaq usiin oo ey iyaga uun juhdi iyo qoraal kabaxay.
Arimaha siyaasadda laguma jaangooyn karo baraha bulshada iyo maqaahiyaha lagu sheekeysto laakiin kahadliddaas waxa ey halis kutahay shaqsiga kahadlaaya siyaasadda ee aan loo ogeyn.
Marwaliba dhallinyartu waa indhaha bulshada inteeda kale waxaana muhiim ah in ey noqdaan dad aad u caqli badan oo daaha gadaashiisa wax ka’arka, ee aan wax kuqaadan haladalada la’iskadhaho oo ey ku hadaaqaan dad aan cuqaal ahayn.
Maxuma siyaasadda in laga hadlo, laakiin waxa aan ila wanaagsanayn oo aan qoraalkaan uqoraayo waa in dhallinyaradu ey kahadlaan arimo eysan xog sax ah kaheyn ama ey sii wariyaan hadal qof kahorreeyay uu yiri oo aan runtiisa la’ogeen, waana wax laga xumaado in adiga oo indhaha bulshada ah aad ku deysato dadka aan rajada badan laga lahayn ama dadka caqligooda qabiilka uu kabuuxo.
Gunaanad, Haddii aad kubiireyso Siyaasadda ugu biir in aad wax kabadasho oo aad kor uga qaaddo heerka ey hadda taagantahay. Kadigtoonaaw waxa aad kahadleyso, xaqiijina run ahaanshahooda. Ha’iska raacin hadalka ey dadku dhahaan adiga oo aan caddeyn u heynin.
Tags: Siyaasadda iyo dhalinyarada?
Next post Cunto Xumada oo La Ogaaday in ay Tahay Dillaaga ugu Weyn
Previous post Xalka Geeska Afrika Waa Nabad, Horumar iyo Iskaashi